सामाजिक सञ्जालमा भाइरल जापान काण्ड2: हेर्नुस यस्तो छ भिडियो… - खबरदार मिडिया
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल जापान काण्ड2: हेर्नुस यस्तो छ भिडियो…
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा फोटो तथा भिडियो भाइरल भैरहेको छ। भाइरल भिडियो एक अ’श्ली’ल भिडियो हो। उक्त भिडियो लाई जापान का’न्ड २ को नाम दिइरहेका छन। facebook Group तिर अत्याधिक share गरिएको उक्त भिडियो को हेर्न तल पढ्दै जानुस Link भेटाउनु हुनेछ। खेती नेपालको लागि अर्थतन्त्र को बलियो मेरुदण्ड हो। गाँजाको बारेमा अन्तरास्ट्रिय रुपमै बहस भैरहेको सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले ३ बर्ष अगाडी नै संयुक्त राष्ट्र संघलाई गाँजालाई लागू औषधको सुचीबाट हटाई यसलाई औषधिय गूण भएको बनस्पतिको सूचीमा राख्न पत्र लेखेको थियो।
सो प्रक्रियालाई संयुक्तराष्ट्रसंघले आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरुको बिचमा छलफलमा पठाएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगमा सचिवालयमा ५३ सदस्य हुन्छन नेपाल पनि सौभाग्यले भोट हाल्न पाउने सदस्यको रुपमा छ । नेपाल सरकारको निर्णय र आदेशमा जेनेभामा रहनु भएका राजदुत प्रकाश कुमार सुबेदीले पक्षमा मतदान गर्नुभयो । नेपाल लगायत २७ मुलुकले लागुपदार्थ सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धिमा गाँजा प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेपछि यो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ।
सिंगल कन्भेन्सन अन नर्कोटिक ड्रग १९६१ भनिने अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको ५३ सदस्य रहने निर्णयक बोर्डमा नेपालले पहिलो पटक मतदान अधिकार प्रयोग गर्दै औषधी जन्य गाँजा को पक्ष मा मत खसाएको हो ।
विश्व ब्यापी रुपमा मान्यता पाइरहेको बहुउपयोगी गाँजा र यस बाट बन्ने औषधीको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ देखी कपडा र खाद्य बस्तु समेत निर्यात गर्ने बाटो खुल्ला गर्नको लागि तत्काल गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै नियमन प्रणालीमा जान सक्नु आजको जटिल परिस्थिती को माग हो ।
यो माग पुरा गर्न सक्ने एक मात्र अवसर वर्तमान सरकारको कांधमा छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले नै अब गाँजा औषधीय गुण भएको बनस्पति र यसबाट मानव जीवनलाई हानी हुँदैन भनेसकेपछी अब यसको प्रतिबन्ध फुकाउन हामीलाई अवसर प्राप्त भएको छ। यो अवसरको उपयोग गर्दै अब छिट्टै गाँजा प्रतिबन्ध फुकावा गर्न सकिनेछ।
गाँजा खेति लाई बैधानिकता दिन नेपाल को संसदमा पुर्व मन्त्री माननीय सांसद सेर बहादुर तामाङले प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। गाँजा खेती प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पुर्व सचीब एबम सामाजिक अभियन्ता भिम उपाध्याय ले सुरुदेखी नै आवाज उठाउदै आउनुभएको थियो।
गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पास भइसके पछि भिम उपाध्याय सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभुन्छ :-
मैले गॉजा वैध गर्नुपर्छ भनेर गत १ वर्षमा दर्जनौँ लेख लेखिसकेको छु, कैयन जूम वार्ता गरेको छु, कैयन टिभी संवाद वा वहस वा अन्तर्वार्ता गरिसकेको छु। आज मेरो एड्भोकेसीले काम गरेकोमा सन्तोष लागेको छ। अरू खेतिको तुलनामा गॉजा खेति गरियो भने १३ गुणा बढी आम्दानी किसानले गर्न सकिनेछ। रू ५० हजार वार्षिक आम्दानी गर्नेले रू ७ लाख कमाउने छ। ३ वर्षमा नेपालको जिडीपी दोब्बर गर्न सकिने छ, १० वर्षमा ५ गुणा बढाउन सकिने छ। यसका लागि बहुपक्षीय बिज्ञहरूको अभियान र ज्ञान अर्थतन्त्र अनुरूपको नीति योजना कार्यक्रम र कानुन एवं संस्था निर्माण गर्नुपर्नेछ।
एकेडेमिसियन, बैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ, ब्यापारी, कानुन ब्यावसायी, ग्रामिण किसान, सहकारी, सुरक्षाकर्मी, ब्यावसायी, उद्योगपति, बैदेशिक ब्यापारमा ध्यान पुग्नुपर्नेछ।किसानलाई राम्रो मूल्य दिलाउन एड्भोकेसी समूहको सशक्त उपस्थिति जरूरी छ भने, रिसर्च, पेटेन्ट राईट, IPR मा पनि ध्यान जानुपर्नेछ।
लाखौ युवा रोजगारीको बाढी आउनेछ, हजारौँ वस्तुहरूको उद्योगहरू खोल्नुपर्नेछ। पर्यावरण, माटो सुरक्षा, वन संरक्षण, प्लाष्टिक प्रयोगको उन्मूलन, औषधीजन्य लाभको त झन् कुरै भएन।
अब कसरी जाने त्यसमा बहस होस्। युएनबाट अन्तर्राष्ट्रिय कडा बाधा हटेको छ।
नेपालका कुम्भकर्णे सरकार, सरकारी विज्ञ, कर्मचारीहरू, नेताहरू , प्राविधिज्ञहरूलाई ओछ्यानमा नै एकबाल्टी पानी खन्याएर भए पनि जगाउनुपर्नेछ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा भिम उपाध्याय को सपना साकार भन्दै उहाँलाइ यो बुलन्द आवाजको लागि धन्यावाद दिनेको ओइरो लागेको छ। गाँजा खेतिलाइ बैधानिकताको लागि अन्य थुप्रै नेपाली अभियन्ताहरुले पनि पटकपटक आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो। Video Link:- https://youtu.be/D5rwgiiPtLU
पुर्व सचिब भिम उपाध्यायको सपना साकार: गाँजा खेतिले पायो बैधानिकता! पूरा पढ्नुस…
हुम्लामा जिप दुर्घटना-४ जनाको मृत्यु बच्चा सहित ७ जना घाइते! दुइजनाको अवस्था गम्भिर…पूरा समाचार पढ्नुस
वार्ड कार्यलयमा यौ’नसम्पर्क गर्दागर्दै वार्ड अध्यक्ष पक्राउ! भिडियो सहित… हेर्नको लागि फोटोमा क्लिक गर्नुस!
लाखौँ बर्ष पुरानो हनुमान को मुर्ती: फोटोमा छोएर दर्शन गर्नुस! सोचेको पुग्नेछ
अब नेपालमा पनि TikTok ब्यान्ड! किन र कहिले देखि? समाचार पढ्नुस…
बुढेसकालको संघर्षको कथा: छोराबुहारिले निकालि दिए! आमाबुबाको माया हुनेले पूरा पढेर शेयर गर्नुहोला।
बिहानै पशुपतिनाथ को दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुस! ॐ लेखेर share गर्नुहोला सोचेको पुग्नेछ।